မိုဘိုင်းဘီလ်တွင်ကာစီနိုဂိမ်းများ |Luck ကာစီနို | £5အခမဲ့အပိုဆုဖမ်းပြီး
နေအိမ် » မိုဘိုင်းဘီလ်တွင်ကာစီနိုဂိမ်းများ | Luck ကာစီနို | £5အခမဲ့အပိုဆုဖမ်းပြီး
အခုတော့ Luck ကာစီနိုမှာမိုဘိုင်းဘီလ်လျင်မြန်စွာထိုအခါအလွယ်တကူတွင်ကာစီနိုဂိမ်းများများအတွက်စွပ်စွဲချက် Add – £5အခမဲ့အပိုဆုဖမ်းပြီး
အသည်းအသန်လောင်းကစားသမားတွေယခုစွဲချက်သို့မဟုတ်သိုက်ပိုက်ဆံထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ် မိုဘိုင်းဥပဒေကြမ်းအပေါ်လောင်းကစားရုံဂိမ်း မှာနောက်ပိုင်းရက်စွဲမှာဒီပေးဆောင် Luck ကာစီနို. ရလဒ်အနေဖြင့်, ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အအင်တာနက်ပေါ်ရှိသစ်ကိုမိုဘိုင်း slot နှစ်ခုအတွက်စားသုံးနိုင်မည်နိုင်ရန်အတွက်လုံလောက်သောငွေသားရှိသည်အမြဲသေချာစေရန်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး.
activati​​on Process ကိုရိုးရိုးနှင့်လွယ်ကူကြောင်းနှင့်ဥပဒေကြမ်းများတိုင်းလကုန်မှာ Paid ဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါတယ် – အခုတော့ Join
အဆိုပါဖုန်းကိုဥပဒေကြမ်း slot နှစ်ခုရွေးချယ်စရာ execute နှင့်များသောအားဖြင့်လစဉ်လတိုင်းရဲ့အဆုံးမှာသူတို့ရဲ့ဖုန်းကိုဥပဒေကြမ်းငွေပေးချေမှုနှင့်အတူ slot ကဂိမ်းသိုက်ပေးဆောင်ဖောက်သည်ပါဝငျရန်လွယ်ကူများမှာ. ဒါကြောင့်အများအားဖြင့်ပိုမိုနှစ်သက်သောခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုငွေပေးချေမှုဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်မိုဘိုင်းဥပဒေကြမ်းအပေါ်လောင်းကစားရုံဂိမ်းများအတွက်ငွေပေးချေငွေသားအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ကဒ်ကိုလက်ခံနေကြတယ်.
activati​​on process ကိုရိုးရှင်း:
မိုဘိုင်းဥပဒေကြမ်းအဆောက်အဦပေါ်လောင်းကစားရုံဂိမ်းကိုသုံးနိုင်မည်ဖြစ်နိုင်ရန်အတွက်, ဒီအတှကျ option ကိုလောင်းကစားရုံ website တွင် activated ခံရဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်.
အဆိုပါ activati​​on process ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူထုံးစံ၌ထွက်သယ်ဆောင်နိုင်ပြီးထက်ပိုဆယ်မိနစ်ကိုယူမထားဘူး.
ဖုန်းကိုဥပဒေကြမ်းလောင်းကစားရုံ option ကိုအတူလစာ၏ activati​​on ပြုသည်သိရသည်နှင့်တပြိုင်နက်, အတည်ပြုချက်လောင်းကစားရုံအသုံးပြုသူများ၏အီးမေးလ်လိပ်စာထံသို့စေလွှတ်လိမ့်မည်.
Luck ကာစီနို Customer များ မှစ. စစ်မှန်သောဘဏ်လုပ်ငန်းအသေးစိတ်လိုအပ်ပါသည်
တစ်ဦးလောင်းကစားရုံမှာမိုဘိုင်းဥပဒေကြမ်းအဆောက်အဦပေါ်လောင်းကစားရုံဂိမ်းကိုအသုံးပြုဖို့လိုအပ်ချက်တစ်ခုမှာစစ်မှန်ဘဏ်လုပ်ငန်းအသေးစိတျ၏ပြဋ္ဌာန်းချက်သည်. အဲဒီလုံခြုံရေး၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အဓိကအားဖြင့်လိုအပ်သည်. တကယ်တော့, ထို SMS ကိုဥပဒေကြမ်းလောင်းကစားရုံရွေးချယ်စရာဖောက်သည်များကတင်သွင်းသည့်ဘဏ်လုပ်ငန်းအသေးစိတ်ကိုအရမ်းနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်စစ်ဆေးအတည်ပြုခဲ့ကြပြီးမှသာ activated နေကြတယ်.
အဆိုပါမိုဘိုင်းဥပဒေကြမ်းအဆောက်အဦမဆိုမျိုး၏အခွန်စည်းကြပ်ပါဝငျဘူး. Customer များလုပ်နိုင်, ထိုကွောငျ့, လစဉ်လတိုင်းရဲ့အဆုံးမှာအခွန်၏ကြီးမားသောငွေပမာဏကိုပေးဆောင်စရာမလိုဘဲထိုကဲ့သို့သောမိုဘိုင်းလောင်းကစားရုံဖုန်းကိုဥပဒေကြမ်းအဆောက်အဦကိုသုံးနိုင်ဖြစ်ခြင်း၏စိတ်ချစွာကြွင်းသောအရာဖြစ်. ပိုပြီးကားအဘယျ, စိတ်လှုပ်ရှားစရာဈေးလျှော့မိုဘိုင်းဥပဒေကြမ်းအဆောက်အဦပေါ်လောင်းကစားရုံဂိမ်း၏အသုံးပြုသူများအများအတွက်လောင်းကစားရုံသိုက်နှုန်းထားများအပေါ်ထောက်ပံ့ပေးစေခြင်းငှါ. ဒီအွန်လိုင်းသူတို့ရဲ့ဂိမ်းလှုပ်ရှားမှုများအပေါ်ပိုက်ဆံကယ်ဖို့ကြည့်ရှုသောသူသည်ပုံမှန်လောင်းကစားသမားတွေများအတွက်ကြီးမားသောပေါင်းသည်.
အဘို့သက်တမ်းရှိ 1 အငယ်ဆုံးအတွက်တစ်နှစ်:
တစ်နှစ်ကို transpired သောအခါ, ဖုန်းကိုဥပဒေကြမ်းရွေးချယ်စရာအားဖြင့်လောင်းကစားရုံလစာတစ်ဖန်ပြန်လည်သက်တမ်းတိုးခြင်းကိုခံရဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်.
ဖုန်းကိုဥပဒေကြမ်းဂိမ်းငွေတောင်းခံလွှာအားဖြင့်လစာပုံမှန်အားဖြင့်အီးမေးလ်ကိုကျော်ပေမယ့်အကြိမ်မှာပို့ကြသည်, ဤသူအဖြစ်ကောင်းစွာ SMS ကိုစက်ရုံကနေတဆင့်ပေးပို့အကြောင်းကြားနိုင်ပါကြောင်း.
အားလုံး လောင်းကစားရုံဂိမ်း မိုဘိုင်းဥပဒေကြမ်းအပေါ်ငွေတောင်းခံလွှာများကိုတစ်ဦးပြစ်ဒဏ်ရှောင်ရှားဖို့အချိန်ပေါ်ပေးဆောင်ခံရဖို့ရှိသည်. လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများအမြဲတမ်းငွေတောင်းခံလွှာ၏ငွေပေးချေမှုအပျေါ၌အပ်ပေးတော်မူကြသည်. ဤရွေ့ကားလည်းဖောက်သည်မေးလ်ပို့ပေးနေကြတယ်.